Tareenka Xawaaraha Sare | RayHaber | raillynews
HomeDUNIDASaacadaha Tareenka Xawaaraha Sare
22 / 05 / 2015 DUNIDA, tareenka, GUUD, Khariidadaha, TURKEY
Tareenada xawaaraha sare leh, oo si weyn u fududeynaya nolosheena ku jirta gaadiidka caalamiga ah, sii wadaan in ay isku xiraan magaalooyin kala duwan, rakaab iyo dhaqamo. Tareenada xawaaraha sarreeya ee u adeegaya magaalooyinka kala duwan leh sifooyinka safarka ee kala duwan iyo noocyada gaariga ayaa la diyaariyaa iyadoo loo maro kalsooni weyn waxayna leeyihiin tignoolajiyo sare. Gaadiidka TCDD wuxuu ku siinayaa fursad safar aan la isku haleyn karin iyada oo la soo gebogebaynayo dhammaan casriyeynta iyo horumarka farsamada ee arimahaan ugu dhakhsaha badan. Tareenada xawaaraha sare leh, oo kuu oggolaanaya inaad magaalada ku gaarto wakhti gaaban oo ka badan baabuurka oo u safriya dhaqaale ahaan, waxay u kala qaybsanyihiin saddex qaybood: lacagta, ganacsiga iyo cashada. TCDD Gaadiidka tikidhada internetka ee gaadiidka ka dib marka aad dooranaysid qiimahaaga waxaad dooran kartaa gaadhi aad rabto inaad safarto. Maadaama aysan jirin gawaarida rakaabka ee baabuurka cuntada, tigidhada laguma iibiyo gaarigaas. Waxaad ku cuni kartaa qaybtan oo waxaad ka iibsan kartaa cuntada bannaan.
Gaadiidka waxaa laga saaraa Bursa, Antalya, Karaman TCDD gaadiidka fudud ee gaadiidka fudud ee qadka tareenada xawaaraha sare ee magaalooyinka qaar. Xiriirka gaadiidka ee ugu dhow ayaa la heli karaa si heshiiskan loo sameeyo iyo in tareenka cad ee laga helo magaalooyinkaas. Xiriiriyahan,
Baska Karaman - Konya Tareenka Xawaaraha Sare
Antalya - Konya Xiriir Xawaaraha Sare Baska
Bursa - Iskuxirka Xawaaraha Sare ee Baska
Macallimiin ka socda Wasaaradda Waxbarashada waxay xaq u leeyihiin qiime dhimis ah 20 iyada oo aan loo eegin inay yihiin dugsiyo gaar ah ama kuwa dawlada. Miisaaniyadahaan waxaa ka mid ah maamulayaasha iyo kaaliyeyaasha maamulayaasha, jaamacadaha iyo kulliyadaha jaamacadaha, iyo macallimiinta jinsiyadda Turkiga ee ka shaqeeya wadamada shisheeye.
Waxaanu hoos ku qornay tareenada xawaaraha sare leh oo loogu talagalay muwaadiniinta si ay u gaarsiiyaan magaalooyinka ay si dhakhso ah u socdaan iyo qaar ka mid ah tayada tareenadaas. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah, waxaad wici kartaa TCDD Gaadiidka ama waxaad ku bilaabi kartaa inaad ku raaxaysatid safarkan raaxada leh iyo mudnaanta leh adoo iibsanaya tikidhkaaga isla markiiba qiimaha ugu qiimaha ah ee bogga iibka tigidhada internetka.
16 Laga bilaabo Juulay YHT Bilecik ilaa Istanbul maalin kasta 08.09-11.49-14.44-19.09, Bilecik ilaa Konya maalin kasta 09.59-15.18-21.14, Bilecik ilaa Ankara maalin kasta 09.11-11.39 -15.54-17.56-19.42-20.18.
Tareenka Xawaaraha Sare ee Ankara-Istanbul wuxuu ka shaqeeyaa maalin kasta 6 u dhexeeya Ankara-Istanbul iyo Istanbul-Ankara. Tareenka xawaaraha sare ee Ankara-Istanbul oo ka sii baxaya Ankara ayaa istaagaya Sincan, Polatli, Eskisehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, Izmit iyo Gebze oo tagaya Pendik ku dhowaad saacadaha 4 iyo daqiiqado 15. Ankara-Istanbul Tareenka xawaaraha sare ah kama istaagayo qaar ka mid ah joogsiyada mararka qaarkood imaatinka tareenka ayaa dhici karta in uu kala duwanaan karo.
Istanbul - Ankara YHT
Ankara-Eskisehir Dugsiga Sare
Ankara-Eskişehir Tareenka Xawaaraha Sare Heesahaan waa mid ka mid ah joogsiga Eskişehir-Istanbul-Ankara Line. Waxa suurtagal ah in lagu sameeyo safarada 5 iyada oo loo marayo linekan. Intaas waxaa sii dheer, xaruntii Ankara-Eskisehir ayaa sidoo kale ku yaal. Xiriirka kubadda cagta ee Ankara-Eskisehir, oo ah mid ka mid ah safarrada 6, ayaa safaradaha 11 maalin kasta. Tan iyo waqtigani waa muddo gaaban, ma jirto wax xayawaan cunto ah. Maaddaama ay saldhigyada tareenadu ku yaalaan magaalada, safarka u dhaxeeya Ankara iyo Eskisehir wuxuu qaadanayaa saacadaha 1,5. Halkii aad ku safri lahayd tareenkaan, waxaad kaloo dooran kartaa xariiqa Anlara- Istanbul. Laba baasood ayaa loo maraa meel isku mid ah.
Eskisehir- Ankara YHT
Tareenka Xawaaraha Sare ee Eskişehir-Ankara Tani waa mid ka mid ah joogsiyada Iskuulka Eskisehir-Istanbul-Ankara. Waxa suurtagal ah in lagu sameeyo safarada 5 iyada oo loo marayo linekan. Intaa waxaa dheer, khadka Eskişehir-Ankara ayaa sidoo kale ku yaal. Khadka Tareenka Xawaaraha Sare ee Eskisehir-Ankara, oo ah mid ka mid ah duulimaadka 6, ayaa maalin walba diyaariya duulimaadyada 11. Tan iyo waqtigani waa muddo gaaban, ma jirto wax xayawaan cunto ah. Tan iyo tareenada tareenadu ku yaalaan magaalada, waqtigan waxay dadka rakaabka siiyaan wax aad u macquul ah. Socdaalka wuxuu qaadanayaa celcelis ahaan saacadaha 1,5.
Ankara-Konya Tareenka Xawaaraha Sare wuxuu soconayaa maalin kasta. Celceliska muddada safarkan waa saacadaha 7 iyo daqiiqadaha 1. Sincan iyo Polatli ayaa istaagay. Waxaad dooran kartaa inta u dhaxeysa laba tikidh, heer jaangooyo iyo jajab. Tareenka 55 ee tareenka xawaaraha sare leh waxaa ka mid ah hal fasal dhaqaale oo 2 + 2 iyo fasalka 2 + 2. Waqtigani waa waqti gaaban, sidaa daraadeed ma jirto wax gaari wata.
Gaadiidka Xawaaraha Soomaliya ee Ankara-Ankara maalin kasta ayuu socdaa. Celceliska muddada safarkan waa saacadaha 7 iyo daqiiqadaha 1. Polatlı iyo Sincan ayaa istaagay. Waxaad dooran kartaa inta u dhaxeysa laba tikidh, heer jaangooyo iyo jajab. Tareenka 55 ee tareenka xawaaraha sare leh waxaa ka mid ah hal fasal dhaqaale oo 2 + 2 iyo fasalka 2 + 2. Waqtigani waa waqti gaaban, sidaa daraadeed ma jirto wax gaari wata.
Gaadiidka Speed-speed ee Konya-Istanbul wuxuu fuliyaa duulimaadyada 2 maalin kasta. Joogitaanka ugu dambeeya ee tareenku waa Istanbul Pendik. Waqtiga safarka celceliska waa saacadaha 4 iyo daqiiqado 20. Joojinta tareenka Konya-Istanbul waa Eskisehir, Bozuyuk, Bilecik, Arifiye, Izmit iyo Gebze. Waxaad iibsan kartaa duulimaadyo leh laba tiknoolaji oo tiknoolaji ah iyo xulasho tiknoolajiyadeed iyo 3 kala duwan ee noocyada kala duwan ee wagon. Tareenka waxaa ka mid ah dhaqaalaha lacagaha, ganacsiga xawaaraha, bakhaarada ganacsiga qashinka oo leh cunto.
Istanbul-Konya Tareenka Xawaaraha Sare wuxuu soconayaa duulimaadyada 2 maalin kasta. Joogitaanka ugu dambeeya ee tareenku waa Konya. Tareenku wuxuu dhammeeyaa wakhtiga safarka saacadda 4 daqiiqo 20. Istanbul-Konya Tareenka Xawaaraha Sare wuxuu u dhexeeyaa Gebze, Izmit, Arifiye, Bilecik, Bozuyuk, Eskisehir. Waxaad iibsan kartaa duulimaadyo leh laba tiknoolaji oo tiknoolaji ah iyo xulasho tiknoolajiyadeed iyo 3 kala duwan ee noocyada kala duwan ee wagon. Tareenka waxaa ka mid ah dhaqaalaha lacagaha, ganacsiga xawaaraha, bakhaarada ganacsiga qashinka oo leh cunto. Tareenka qiimaha tikitka ayaa ku xiran noocyada gaariga.
Haddii aad qabtid wax su'aalo ah, waxaad wici kartaa Gaadiidka TCDD (444 8 233) ama waxaad bilaabi kartaa tikidhkaaga hadda oo aad ku raaxaysatid safarkan raaxada leh iyo mudnaanta leh adoo iibsanaya tikidhkaaga isla markiiba qiimaha ugu qiimaha badan.
Waqtiga Tareenka Xawaaraha Sare
Masruuftu waxay ku socotaa waddo tareen oo ku taal magaalada Bursa!
6 oo ka mid ah Xarumaha Saadka ayaa la furay, Dhisme ka hooseeya Dhisme 5
shacaab ayuu yiri:
Maxay yihiin qiimahaaga 3 laga bilaabo 2 September ilaa Eskisehir?